Semalt: Tricks Yakanakisisa Inoshandiswa NeCybercriminals Kuti Uwane Access KwaAte Account yako yeEmail
Ndiyo 2017 uye kutyisidzira kweumwe munhu kutora kero yako yeimeri ndeyechokwadi. Ichokwadi chaizvo. Mumwe munhu panguva ino ari kunyengedzwa kuti apiwe ruzivo rwekutsvaga kwemairipi avo kumunhu asiri mutorwa. Mune mamwe mazwi, vatambudzi vari kukanganisa Yahoo Mail, Gmail uye Hotmail account dzisina zvishoma zvehuwandu hwemagariro evanhu uye nekutumira meseji - escuela de fotografia online.
Ivan Konovalov, the Semalt Mutengi Achibudirira Mutevedzeri, anotaura kuti nyaya dzinonyanya kushandiswa zviri nyore kwazvo kuita. Tora muenzaniso wekodhi anozvigadzira semapolisi. Kana akakuisa uye akakurayira kuti ubudise mumotokari yako uye ugoisa zvigetsi, iwe waizoramba here? Kwete kwete. Munhu akawandisa aigona kudaro pasina kubvunza mubvunzo. Hazvishamisi kuti kuzvienzanisa nemapurisa ndeimwe yezvakaipa zvakakomba pose pose pasi pose. Mapurisa anotsvaga ane zvinhu zviviri zvaunofamba nazvo: zvakajeka, uye vanhu vanotenda kuvimba masimba. Izvi ndizvo zvinoshandiswa ne-cybercriminals.
Pakupedzisira, tsika yakatanga. Iyo pfumo phishing scam inotarisirwa kune vashandisi vedhare. Chinangwa chemukana uyu ndechokuti uwane ruzivo rwekero yako ye email. Icho chiri nyore kushandiswa kwehutano hwemagariro iyo mamiriyoni evanhu ari kuwira.
A hacker (munhu akaipa) anongoda kuziva email yako nenhamba yefoni.Nokuti zvinoshamisa kuti izvi zviri nyore kuwana. Vashandi.Nyika ino inobvumira vashandisi kugadzirisa zvakare mapepaji avo nekuva nekodhi kana chibatanidza kutumirwa kunhamba yavo yekufambisa.
Muenzaniso wekare wekutsvaga kwekuita: Kubatwa kwebhuku reGmail
Muchiitiko ichi, kune mapoka maviri: Anne (muridzi wemabhuku e Gmail) uye Dan (munhu akaipa). Anne anosarudza kunyora nhamba yake neGmail kuitira kuti pose paanovharwa kunze kwekambani, kero yekuongorora inotumirwa nhamba yake yefoni. Dhani, kune rumwe rutivi, akashandisa Anne uye anoziva nhamba yake yefaira (zvichida kubva kumabhuku ake evanhu vekugarisana nevamwe kana kubva kune imwe nzvimbo iri paIndaneti).
Murume akaipa (Dhani) anoda kuwana ruzivo rweAnland's Gmail account. Anoziva zita rake remutauro asi kwete password. Anopinda muzita rekushandisa ndokubva avhara 'rubatsiro rubatsiro' mushure mekufungidzira password. Anocheka "Handiyeukei password yangu," inopinda paEnderi ye-imeyeri inoteverwa nekuwana chekuita pafoni yangu. Nhamba yekutendesa nhamba nhanhatu inotumirwa nhamba yaAnn. Dhani anotumira mharidzo kuna Anne achireva kuti ndiye nyanzvi kubva kuGoogle uye kuti vakaona basa risina kujairika pane account. Anomukumbira kuti atungamirire kodhi yekuongorora kuitira kuti vagadzirise dambudziko racho. Anne anotenda kuti izvi ndezvechokwadi, zvinotungamira nhamba yekuongorora. Dhani anoshandisa code iyi kuti awane kukwanisa kwenyaya yake.
Kana Dhani achikwanisa kuwana iyo, anogona kuita chero chinhu chinosanganisira kugadzirisa zvakare password uye kuchinja kusarudzwa. Ndiyo kutora zvakakwana. Izvo zvinotevera zvinonzwisisika. Kuti uve wakachengeteka kubva muchirongwa ichi, usambopa magwaro ekuvimbisa kune ani zvake. Muzvokwadi, kana iwe usati wakumbira kune imwechete saka ona kuti mumwe munhu haasisina zvakanaka.